Harowo.com | HarawoNews – Somalia Information & Analysis – Adeerkay waxa uu yidhi wax caqliga iyo damiirka bani aadamku ogolaan karayo maaha, Dadkeygii oo dhanbaa la laayay waan u joogay sidee Garaad u odhan karaa—-. DAAWO VIDEO
Adeerkay waxa uu yidhi wax caqliga iyo damiirka bani aadamku ogolaan karayo maaha, Dadkeygii oo dhanbaa la laayay waan u joogay sidee Garaad u odhan karaa—-. DAAWO VIDEO
Feb 19, 2014 SOMALI NEWS Comments Off on Adeerkay waxa uu yidhi wax caqliga iyo damiirka bani aadamku ogolaan karayo maaha, Dadkeygii oo dhanbaa la laayay waan u joogay sidee Garaad u odhan karaa—-. DAAWO VIDEO
Adeerkay waxa uu yidhi wax caqliga iyo damiirka bani aadamku ogolaan karayo maaha. Hooyo iyo ilmaheedii ayaa meel lagu wada dilay Aabo iyo ilmihiisii ayaa meel lagu wada dilay. Dadkaygii oo dhanbaa la laayay waan u joogay sidee Garaad u odhan karaa DAAWO Mustafe Cabdiraxmaan Muumin
Wiil Mareykan ah iyo Gabar Somali ah Oo Masaajid isku dhexmehersaday Mareykanka iyo Qaraabadii labada dhinac oo.............. 23 Years of Being in Coma